Darpan Nepal – यी सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुस् ! कसैलाई सुनाउनै नहुने यी ५ सपनाहरु तल पढ्न्नुहोला !
यी सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुस् ! कसैलाई सुनाउनै नहुने यी ५ सपनाहरु तल पढ्न्नुहोला !
Sep 15, 2018Admin12Religion/Rashifal0Like
मानब जीवननै एक सपनाको संसार हो भन्ने गरीन्छ,तर देख्ने सपना र काल्पनिक सपना भीन्ना भीन्नै हुन्छन् तेसैले गर्दा बैज्ञानीक हरुले पनी सपनाको धेरै प्रसम्सा गरेको पाईन्छ।
हरेक व्यक्तिले सुतेको समयमा सपना देख्नु एक
सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरुले निन्द्राबाट बिउझिंदा आफूले देखेका सपनाहरु बिर्सिने गर्छन। त्यसैले उनीहरुलाई सपनामा देखेका कुराहरुले जीवनमा परेको असरबारे थाहा हुँदैन।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको संकेत गर्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरु रातको समय मा देखेको सपना विहान उठ्नासाथ आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यलाई सुनाउने गर्छन।
यसरी आफूले देखेका सपना सुनाउने गर्दा क हुन्छ ? यदि आफूले देखेका केही अचम्मलाग्दा सपनाहरु निन्द्राबाट बिउँझिने बितिकै अरुलाई सुनाउने गर्दा तपाईलाई त्यस सपनाको फल प्राप्त नहुने साथै यसले तपाईको जीवनमा पर्ने प्रभाव घट्दै जान्छ।
आज हामी तपाईहरुलाई यस्ता केही पाँच वटा सपनाको बारेमा बताउन जाँदै छौँ जुन तपाईले अन्य व्यक्तिहरुलाई सुनाऊनु भएमा तपाईको जीवनमा यसबाट हुने प्रभाव कम हुँदै जाने गर्छ।
Previous Postयी ४ राशि भएका मानीसहरुले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैन्न थाहा पाईराखौं, जानीराखौं!! Next Postनहरमा फालिएको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला पर्यो..